भगवानलाई चिठी – Enayanepal.com
मैले तिम्रो महानताको व्याख्या गर्दै हिड्नु भनेको तिम्रो अगाडी आफै ठूलो कहलाउनु हो । संसारले तिमीलाई पुज्छ । म कसरी तिमीभन्दा महान बनेर बस्न सक्छु । तिमीले आजसम्म मेरो मनमा चोट पुग्ने कुनै काम गरेका छैनौ । छौ त केवल पाईला पाईलामा साथ मात्र दिईरहेका छौ । म आफैलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि तिमीले बारबार मलाई सम्झाईरहेका छौ । आजसम्म मैले तिमीसँग कुनै गुनासो गरेकी छैन र तिमीले पनि त मैले गुनासो गर्नै पर्ने कुनै काम गरेका छैनौ । विगत २०५५ सालदेखि वि.सं. २०७३ साल सम्म निन्तर साथ दिँदै आएका तिमीलाई हरेक वर्षको अन्तिममा झँै २०७३ सालको अन्तिममा तिमीलाई तिम्रो घर सामु गएर तिमीलाई सधन्यवाद दिन सकिन । त्यसको लागि हृदयदेखि नै माफि चाहान्छु ।
तिम्रो घरसम्म गएर तिमीलाई कुनै उपहार चढाउन नसकेपनि हृदयका कुनदेखि नै जगत भरीको तिमीलाई मन पर्ने उपहार मनबाटै चढाएकी छु । आजबाट मेरो नयाँ साल वि.सं २०७४ शुरु भएको छ । २०७४ सालमा मैले धेरै काम गर्नु२०७४ सालमा मैले धेरै काम गर्नु छ । आफ्नो र देशका लागि थुप्रै सपनाहरु बुनेकी छु । मेरा सपना पूरा गर्न तिमीले मलाई कुनै शक्तिको प्रयोग गर्नु पर्दैन । केवल मेरो परिश्रम गर्ने बानीलाई नघटाईदिए पुग्छ । म मेरो परिश्रममा निरन्तर अडीग भएर अगाडी बढि रहेँ भने २०७४ सालमै मेरा सपनाहरु पूरा गर्न सक्छु । त्यसमा कुनै दुई मतै छैन ।
आज म तिमीसँग कहिल्यै र कसैले नमागेको कुरा माग्दैछु पिलिज नाई नभन्नु ल । मेरो अनिन्द्राको सपना मेरो पलपलको सपना मेरो सुन्दर शान्त देश बनाउने म एक्लैले शुरु गरेको पाँच वर्ष भईसक्यो । तर पनि कुनै परिवर्तन देखिँन । न शान्ति पाएँ नेपाल आमाले न विकास देखिन । मेरी आमा पलपल मरेर पनि बाँचिरहेकी छन् । मेरी आमालाई क्यान्सर भईसक्यो । म एक्लैले केही गर्न सकिरहेकी छैन । म मेरी आमाको छटपट्याई हेरेर बस्न सक्दिन । मेरी आमाको पिडा देख्दा मेरो मुटु चिरिन्छ । आँशुर वर्षा झैँ बर्षिन्छन् ।
मेरी आमाको पिडाको बारेमा आमाका छोराहरुलाई बारबार भन्छु । तरपनि उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन । मेरी आमाको पीडामा उनीहरु रमाईरहेका छन् । त्यसैले हे भगवान मेरी आमालाई यस्तो शक्ति देउ की मेरी आमाको क्यान्सर सन्चो होस् र मेरी आमाले फेरी एउटा मलाई साथ दिने सन्तान जन्माउन । अनि हामी मिलेर नेपाल आमालाई यगौँयुग बचाई राख्न सकौँ । तिमीलाई थाहा छ की छैन ? म आमा विना कुनै सपना पूरा गर्न सक्दिन । मेरा हरेक सपना पूरा गर्न आमाको साथ चाहिएको छ । मेरी आमाले यी आँखामा देखेका सपनाहरु मेरी आमाकै निम्ती पूरा गर्न चाहान्छु । नेपाल आमा विना म रहन सक्दिन । म भन्दा पछाडीका मेरी आमाका सन्तानहरुका लागि भएपनि मेरी आमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ । मेरी आमा नै रहिनन भने उनीहरुको के हालत होला तिमी आफै सोच त ।
त्यसैले हे भगवना तिमी मेरी आमाका म भन्दा अगाडीका सन्तानका भरमा परेर मेरी आमालाई यसरी नतड्पाउ । मलाई त दाजु भन्न पनि लाज लाग्छ । मेरी आमाले छोरा हुन भन्न पनि छोडिसकिन भने तिमी कसरी उनीहरुको विश्वासमा बसेका छौ खै । मलाई मेरी आमाको मुहारमा लालीकिरण चम्केको हेर्नु छ । मेरी आमाको मुस्कार कस्तो छ खै एक पटक त्यो मुस्कानमा मलाई रमाउन मन छ । मेरी आमाको मनमा शान्तिको वास भएको आभाष पाउनुले पहिलो पटक मागेको यो मेरो सानो नासोलाई दिन अस्वीकार नगर है । त्यो दिन पनि आउने छ । त्यो दिन तिमीले भन्दा म ठूलो नासो दिने छु । मेरो २०७४ साल तिम्रो हातमा छ ।